Kilowatt: ihe ọ bụ, àgwà, mmalite na ike eletrik | Green Renewables
Kilowatt: ihe niile ị chọrọ ịma
Mgbe anyị na-arụkọ ọrụ ike eletrik nke ụlọ anyị, anyị ga-eburu n'uche na kilowatt. Nke a bụ unit nke ike a na-ejikarị eme ihe na nha 1000 watts. N'aka nke ya, watt bụ otu nke na-ebuli usoro mba ụwa dị ka otu joule kwa nkeji. Nke a bụ okwu na-adọrọ mmasị ịmara ịmatakwu gbasara ike eletrik anyị na-arụkọ ọrụ.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara kilowatt na njirimara ya.
1 Gịnị bụ kilowatt
2 Mmejọ metụtara kilowatt nkịtị
2.1 Watt na Watt-hour
2.2 Watt-hour na Watt kwa elekere
3 Ọdịiche dị n'etiti ike na ike oriri
4 Mmalite na akụkọ ihe mere eme
5 Ike eletrik
Gịnị bụ kilowatt
Kilowatt (kw) bụ ike a na-ejikarị eme ihe, nke dabara na 1000 watts (w). Watt (w) bụ sistemụ ike nke mba ụwa, ya na otu joule kwa nkeji. Ọ bụrụ na anyị na-eji unit eji na ọkụ eletrik na-egosipụta watts, anyị nwere ike ịsị na watts bụ ike eletrik na-emepụta site na ike dị iche nke 1 volt na nke ugbu a nke 1 amp (1 volt amp).
A na-akpọkwa elekere watt (Wh) dị ka nkeji ike. Oge elekere watt bụ nkeji ike bara uru, nke dabara na ike nke otu watt nke ike na-emepụta n'ime otu elekere.
Mmejọ metụtara kilowatt nkịtị
Kilowatts na-enwe mgbagwoju anya mgbe ụfọdụ yana nkeji nha ndị ọzọ metụtara ya.
Watt na Watt-hour
Ike na ume dị mfe mgbagwoju anya. Enwere ike ịsị ike bụ ọnụọgụ ike ejiri (ma ọ bụ mepụta). Otu watt hà otu joule kwa nkeji. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na bọlbụ 100 W na-anọ otu awa. ike a na-eri bụ 100 watt-hours (W • h) ma ọ bụ 0,1 kilowatt-awa (kW • h) ma ọ bụ (60 × 60 × 100) 360.000 joules (J).
Nke a bụ otu ike achọrọ iji mee ka bọlbụ 40W na-enwu maka awa 2,5. A na-atụ ike nke ụlọ ọrụ ọkụ na watts, mana ike a na-emepụta kwa afọ na-atụ na awa watt.
A naghị ejikarị nkeji ikpeazụ eme ihe. A na-atụgharị ya ozugbo gaa elekere kilowatt ma ọ bụ elekere megawatt. Oge kilowatt (kWh) abụghị otu ike. Oge awa kilowatt bụ nkeji ike. N'ihi ọchịchọ nke iji kilowatts kama awa kilowatt iji belata okwu ike, ha na-enwekarị mgbagwoju anya.
Watt-hour na Watt kwa elekere
Iji okwu na-ezighi ezi mgbe ị na-ekwu maka ike na awa kilowatt nwere ike ịkpata ọgba aghara ọzọ. Ọ bụrụ na ị gụọ ya dị ka awa kilowatt ma ọ bụ kWh, ọ nwere ike ịgbagwoju anya. Ụdị ngwaọrụ a na-ejikọta ya na mmepụta ike ma nwee ike igosipụta njirimara nke ọkụ ọkụ n'ụzọ na-adọrọ mmasị.
Ụdị otu dị n'elu, dị ka watts kwa elekere (W / h), na-egosipụta ikike ịgbanwe ike kwa elekere. Enwere ike iji ọnụ ọgụgụ watts kwa elekere (W / h) mee ka ọnụ ọgụgụ nke mmụba ike nke ụlọ ọrụ ike. Ka ihe atụ, a ike osisi na ruru 1 MW site na efu ruo nkeji 15 nwere ọnụego mmụba na ike ma ọ bụ ọsọ nke 4 MW / awa.
Ike nke osisi hydroelectric na-eto ngwa ngwa, nke na-eme ka ha dị mma maka ijikwa ibu dị elu na ihe mberede. Ọtụtụ n'ime mmepụta ike ma ọ bụ oriri n'ime oge ka egosipụtara n'ime awa terawatt riri ma ọ bụ mepụta. Oge a na-eji na-abụkarị afọ kalenda ma ọ bụ afọ mmefu ego. Otu terawatt • elekere ruru ihe dị ka megawatts 114 nke ike a na-eri (ma ọ bụ emepụtara) na-aga n'ihu n'otu afọ.
Mgbe ụfọdụ ike a na-eri n'ime afọ ga-abụ nke ziri ezi, na-anọchite anya ike arụnyere, na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka onye natara akụkọ ahụ ịhụ ntughari. Dịka ọmụmaatụ, oriri na-aga n'ihu nke 1 kW kwa afọ ga-eme ka ọchịchọ ike dị ihe dịka 8.760 kW • h / afọ. A na-atụle afọ Watt mgbe ụfọdụ na ogbako maka okpomoku zuru ụwa ọnụ na iji ike eme ihe.
Ọdịiche dị n'etiti ike na ike oriri
N'ọtụtụ akwụkwọ physics, akara W gụnyere iji gosi ọrụ (site na okwu Bekee ọrụ). A ga-ekewa akara ngosi a site na nkeji na watts (ọrụ / oge). Ọtụtụ mgbe, n'akwụkwọ, a na-eji mkpụrụedemede W dee ọrụ n'ọdịdị ma ọ bụ ihe yiri ihe osise n'efu.
A na-egosipụta ike na kilowatts. Dị ka ọmụmaatụ, ngwa ụlọ. Ike na-anọchite anya ike achọrọ iji rụọ ọrụ akụrụngwa. Dabere na arụmọrụ ngwaọrụ a nyere, ọ nwere ike ịchọ karịa ma ọ bụ obere ike.
Akụkụ ọzọ bụ ike oriri. A na-atụ oriri ike na awa kilowatt (kWh). Uru a dabere na ike ole ngwaọrụ na-eri n'otu oge yana ogologo oge ọ na-eri ike.
Mmalite na akụkọ ihe mere eme
Akpọrọ Watt aha onye ọkà mmụta sayensị Scotland bụ James Watt n'ịkwanyere aka ya na mmepe nke igwe ọkụ ọkụ. A kwadoro unit nke nha nke abụọ Congress nke British Association for the Advancement of Science na 1882. Nkwenye a dabara na mmalite nke mmiri azụmahịa na mmepụta uzuoku.
Mgbakọ nke iri na otu nke ịdị arọ na nha na 1960 nakweere nkeji nleta a dị ka nkeji maka ike na International System of Units (SI).
Ike bụ ọnụọgụ ike a na-emepụta ma ọ bụ rie maka nkeji oge ọ bụla. Enwere ike tụọ oge a na sekọnd, nkeji, awa, ụbọchị ... a na-atụkwa ike na joules ma ọ bụ watts.
Ike nke a na-enweta site na usoro eletrik na-atụle ikike ịmepụta ọrụ, ya bụ, ụdị "mgbalị" ọ bụla. Iji ghọta ya nke ọma, ka anyị tinye ihe atụ dị mfe nke ọrụ: mmiri kpo oku, imegharị ahịhịa nke onye ofufe, imepụta ikuku, ịkwaga, wdg. Ihe a niile chọrọ ọrụ na-achịkwa iji merie ikike ndị na-emegide ya, ike dị ka ike ndọda, ike esemokwu na ala ma ọ bụ ikuku, ọnọdụ okpomọkụ dị ugbu a na gburugburu ebe obibi ... yana ọrụ ahụ dị n'ụdị ike (ọkụ eletrik, Okpomoku, igwe ...).
Mmekọrịta e guzobere n'etiti ike na ike bụ ọnụego nke ike na-eri. Ya bụ, ka esi atụ ike na joules riri kwa nkeji oge. Julaị ọ bụla a na-eri kwa sekọnd bụ otu watt (watt), ya mere nke a bụ unit nke ihe maka ike. Ebe ọ bụ na watt bụ obere nkeji, a na-ejikarị kilowatts (kW). Mgbe ị hụrụ ụgwọ ọkụ eletrik, ngwa ngwa na ihe ndị ọzọ, ha ga-abata na kW.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere kilowatt na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Kilowatt: ihe niile ị chọrọ ịma